Modern Art Galleries In Europe Uye papi | Save A Train
musha > Travel Europe > Modern Art Galleries In Europe Uye papi
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 07/06/2020)
Vanoda mifananidzo ano vane nzvimbo dzakawanda kushanyira mu Europe. Aine fuma chisarudzo chakadaro, zvichida kupfuura kuoma chikamu uchisarudza rwendo. zvisinei, kana uri kutarisa kushanya Europe wemakurukota hotspots unyanzvi ubanguranyika, kuregererei kuronga rwendo rwenyu yakapoteredza? With vamwe zvakanaka akaronga chitima Vatasvi, unogona kushanyira zvose kwedu pamusoro mapiki ano uri namaberere mu Europe:
Tate Modern Art Gallery mu London chimwe chezvinhu mukurumbira dzinoitwa ano uri namaberere mu Europe. Harisi oga kushanyira muguta iro unozvirumbidza pamusoro 1,000 namaberere. zvisinei, izvozvo ndiye chinonyanya nevakawanda vane vashanyi. Pakutanga Tate Modern aiva chikamu Tate Gallery iro rakavakwa 1897. Kupfuuridza nguva, Tate akatanga kuwedzera uye 2000 yakakamurwa dzikava zvakasiyana maberere mana. Kubva avo mana, Tate Modern ndiye kushanyirwa dzakawanda, uye dzimba zvinopfuura chete mumifananidzo. Kana uchida kuona London kuti uri zviziviswe pachako, unogona kusvika nyore guta nechitima neevakawanda zvikuru maguta European.
The National Gallery of Modern uye Contemporary Art, Rome, Itari
inonzi The National Gallery pamusoro Modern uye Contemporary Art muna Italian, ichi Art Gallery mu Rome ane zvose zvaunoda. Uye ichangobva raiwedzera patsva hutsva, kuti iwe unogona kumira panze kunyange zvakawanda panguva kuratidzira. maberere Izvi rakasiyana nenzira kwayo zvokuratidzira. Chinotaura zvakawanda pamusoro madingindira, mavara uye chimiro kupfuura zvakafanana. eras uye zvitaera. Inogonesa muenzi ose zvichitambudzwa uri mutsva, akasiyana nzira, nechokwadi kuti kushanya achava asingakanganwiki. Roma iguta guru kushanya nechitima. Pane zvimwe yevedza migwagwa unogona kutora munzira kuenda ruzivo zvimwe zveItari.
Kunsthalle Zurich, Siwizarendi
Switzerland panguva imwe uye ano uri Chiitiko ari vaizvambarara uye vakagwinya, pamwe vakawanda namaberere urichengetedze mupenyu. Munhu kazhinji ichikurudzirwa kuti kushanya ndiko Kunsthalle Zurich. Rine duku Exhibits kuti hazvimbokundikani kuti zvinoshamisa kuti mushanyi. kakawanda kuchinja izvi kubatsira Kunsthalle reinvent kwayo kuzivikanwa nguva dzose. Unogona kusvika Zurich nechitima kubva Munich, Vienna, uyewo mamwe maguta European iwe kushanyira ari ano uri kuvhima yako.
Pompidou, Paris, Furanzi
No uchimuratidza ano uri namaberere mu Europe wakakwana pasina kushanyira Paris, Furanzi. zvisinei, panzvimbo Louvre, isu dzinorumbidza vakananga kuna Pompidou. Imomo uchawana rakasiyana mapurani chimiro pamwe ose escalators ayo, pombi dzemvura, uye simbi furemu chinooneka pamusoro panze. Asi ruzivo asingadi kugumira ipapo, sezvo The Pompidou ane pamusoro 50,000 Anoshanda kwayo muunganidzwa. Ndicho chimwe chezvinhu zvinokosha muunganidzwa ano uye panguva nounyanzvi riri zvechokwadi inokosha kushanya. Svika Paris nechitima kubva London, Amsterdam, KweBrussels nemamwe maguta Europe.
Contemporary unyanzvi namaberere mu Europe zvechokwadi munhu pamberi kuona. The yakanakisisa chikamu pamusoro kuronga rwendo unyanzvi-zvinangwa ndechokuti zvose izvi maguta nyore asvika nechitima. Kana wagadzirira kuenda, Book Your Train Tickets zvino kunakidzwa chokufambisa!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmodern-art-galleries-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / ja kuti / nl kana / of uye mimwe mitauro.
europetravel London longtrainjourneys mazano trainjourney Tranride nezvitima travelswitzerland